Fantatr'i Pandawill fa tena manakiana ny fotoana rehefa mitady ny hanaiky ny prototype ianao na manamboatra andiam-pilotoana PCB ho fankatoavana ny endrika. Fantatsika ihany koa fa ny tetik'asa dia mihazakazaka ara-potoana na aloha, ary matetika ny tena maika ny filan'ny prototype dia tena misy tokoa.
Ny departemantan'ny CAM Engineering dia hiantoka tsy hisy fotoana very amin'ny famokarana ny volavolanao prototype ary hatolotra ara-potoana. Azontsika atao ny mamorona endrika PTH tokana sy roa sosona amin'ny endriny 24 ao anaty boky kely ary 72-96 ora ho an'ny multilayer hatramin'ny 8 sosona. Ho an'ny tabilao maika, azafady ampahafantaro anay mialoha mba hahafahanay miantoka fa miroso ny angon-drakitra amin'ny minitra raisinay ny angon-drakitrao. Ary hiantoka izahay fa tsy misy fotoana very amin'ny fizotry ny famokarana.
Category Prototypa Quick Turn Fotoana fitarihana mahazatra (batch kely)
2 sosona 2 andro 5 andro
4 sosona 3 andro 6 andro
6 sosona 4 andro 7 andro
8 sosona 5 andro 8 andro
10 sosona 6 andro 10 andro
Ny data rehetra dia fehezina ka ny tetezamita manaraka ho an'ny famokarana boky dia manome antoka ny fitohizan'ny fitaovana sy ny endrika ampiasaina hanekena ireo prototypes sy ny hamaroan'ny famokarana. Pandawill Circuits dia safidy tsara amin'ny asanao prototypa ary hanampy amin'ny fanatsarana ny endrika sy ny endrik'ireo prototypes anao izahay mba hahatratrarana ny vidiny mora indrindra amin'ny volan'ny famokarana nekena.
Miresaha amin'i Pandawill dia hanampy anao amin'ny varotra haingana izahay.